'Onye Ọjọọ Bi' 3 'Gbanyere' Onye Ọjọọ: Nguzogide '- iHorror
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 'Onye Ọjọọ 3' Biaghachi Na-agụnye 'Onye Ọjọọ Ọjọọ: Nguzogide'
'Onye Ọjọọ 3' Biaghachi Na-agụnye 'Onye Ọjọọ Ọjọọ: Nguzogide'
edere ya Trey Hilburn III December 10, 2019
N'oge Playstation State nke Play n'ụtụtụ a, Capcom gosipụtara asịrị na anyị na-anata a Onye bi na ya Ọjọọ 3 imeghari na dịtụ anya.
Mgbe ihe ịga nke ọma nke Onye bi na ya Ọjọọ 2, agagharị a enweghị nsogbu ọ bụla na nke anyị na-atụsi anya ya ike.
Debe n'etiti ntiwapụ nke T-virus, ngwa agha sitere na ụlọ ọrụ ọgwụ na-ahụ maka ọgwụ bụ Umbrella Corporation. Egwuregwu ahụ bụ mmalite nke Nemesis - nnukwu ihe ọkụkụ bioweapon e mere maka ma obi ọjọọ na ọgụgụ isi na-arụ ọrụ nke ukwuu - onye nkịta ọ chụrụ nke onye otu STARS Onyinye Valentine mere ya akara ngosi nke usoro Resident Evil ™. Ojiri ngwa agha nke ngwa agha dị ike ma kechie na uwe ojii iji zoo atụmatụ ya, Nemesis ga-emerụ ahụ, pịpịa ma ọ bụ bibie ihe mgbochi ọ bụla n'okporo ụzọ ọ ga-aga.
Ntughari ga-abịa na ọtụtụ asymmetrical multiplayer, Ọjọọ bi: Nguzogide. Nke tupu ugbua chere na ọ bụ ihe kwụ ọtọ Resident evil aha.
Agbakwunye ihe mkpọsa otu ọkpụkpọ egwu a na - eme bụ Resident Evil Resistance, asymmetrical 4 vs. 1 multiplayer egwuregwu nke ekpughere mbụ dị ka aha ọrụ na Tokyo Game Show na mbido afọ a. Dị ka Mastermind n'azụ ihe nkiri ahụ, ndị egwuregwu nwere ike iburu ọrụ nke ndị isi ihe Ọjọọ dị ka Annette Birkin n'ọtụtụ nyocha ndị na-egbu egbu. Jikwaa gburugburu ebe obibi ma jikwaa kaadị iji debe ndị na-eme ihe ọjọọ, tọọ ọnyà na kamera nchedo iji mebie ndị lanarịrị ndụ. Nke mbụ maka aha, Masterminds nwere ike ịchịkwa ọmarịcha bioweapons dịka G-Birkin na Onye ọchịchị aka ike. N'aka nke ya, ndị lanarịrịnụ ga-arụkọ ọrụ ọnụ nke ọma, na-eme ọtụtụ ngwa agha dị iche iche na ikike ọkpụkpọ pụrụ iche nke ọkpụkpọ ọ bụla, iji nwee ohere ịgbanahụ nnwale ahụ tupu oge agafee.
Onye bi na ya Ọjọọ 3 akụrisị shelves n'April 3, 2020.
Guysnu nwere obi uto banyere ilaghachi Onye bi na ya Ọjọọ 3? Mee ka anyi mara na ngalaba a.
CapcomnemesisOnye bi na ya Ọjọọ 3Na-eguzogide
David Arquette gbadara kpamkpam maka nlọghachi na 'mkpu 5'
Tightwad Terror Tuesday - Ihe nkiri efu maka 12-10-19